Axmed Madoobe Khaat Ayuu Horay u Geeyey Garoowe | Xaqiiqonews
Axmed Madoobe Khaat Ayuu Horay u Geeyey Garoowe
Sida aad wararka ku aragteen madaxweynaha ku meel gaarka ah ee Jubbaland Axmed Madoobe ayaa safar ku tagay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.
XAQIIQO NEWS -WARAR GUDAHA
Safarkani oo ilaa hadda aan la shaacinin u jeedkiisa rasmiga ah ayaa imaanaya maalmo un ka dib markii magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey shirka maamul goboleedyada, shirkaasi oo ay ka baaqdeen Madoobe iyo Deni.
Deni oo Axmed Madoobe ku soo dhaweynaya Garoowe
Sida ay xogta sheegeyso diyaaradda Axmed Madoobe oo ka soo ambabaxday Kismaaya waxa ay waday 120 jawaan oo jaad ah kaasi oo qaab qarsoodi ah looga soo qaaday dalka Kenya.
Sidoo Kale Aqri..Waa Tan Sababta Aadan Ogeyn ee Axmed Madoobe Kismaayo Kaga Guuray
Goob joogayaal ku sugnaa garoonka diyaaradaha Garoowe ayaa xaqiijiyey in ay arkeen jawaano khaat ah oo laga dejinaayo diyaaraddii Axmed Madoobe uu Saarnaa.
DF-ka Soomaaliya ayaa horay u mamnuucday caleenta Khaatka oo Soomaaliya kaga yimaada Itoobiya iyo Kenya, hase yeeshee Kenya ayaa dhowr mar sameysay isku day sharci darro oo ay Khaatkeeda ku gelineyso gudaha Soomaaliya.
Ma jiro ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka Garoowe, sidoo kale DF-ka kama aysan hadlin dhacdadan.